Billad sharafta Nobel-ka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Billad sharafta Nobel-ka
La daabacay onsdag 10 oktober 2007 kl 15.22
Maalintii Isniinta taariikhduna ahyed sideedda bisha Oktoober, waxaa dalka ka bilowdey toddobaadkii soo bandhigga culumada ku guuleysatey bilad sharafta Nobel Prize-ka.
Raxantii ugu horreysey ayaa la soo bandhigey ee ku guuleysatey sannadkan Nobel prize-ka ee maadooyinka medicin-ka iyo Fisiologi, maadada barashada organnada nool iyo sida xubnahoodu u howl-galaan.
- Abaalmarintaa ayaa sannadkan ey si wada-jir ah nasiib ugu yeesheen
Mario R Capecchi iyo Oliver Smithies, oo u dhashey dalka Mareykanka iyo Martin J Evans; ee ka soo jeeda Boqortooyada Ingiriiska.
Abaalmarintasi oo gaareysa 10 malyuun ee koronka Iswiidhishka ayey ku muteysteen sida uu sheegey sarkaal u hadlayey machadka caafimaadka ee Karolinisk, guusha ey ka gaareen isku dhafka iyo wax ka bedelka unugyada xayawaanka nool qaasatan Jiirka oo ey tijaabooyin ku sameeyeen.
Tallaabooyinka ey culimadaasi aasaaska u dhigeen ayaa laga isticmaalaa dhammaan goobaha cilmibaarista ee waddammada horey u marey, waxbadanna u suurtageliyey aragti ka duwan sidii xal loogu heli lahaa cudurro aan horey loo heysan in xal loo heli karo.
Sidoo kale waxaa maalintii Salaasada taariikhduna ku beegneyd 9, shaaca laga qaadey laba caalin ee ku guuleystey biladda abaal marinta Nobel-ka ee maadada Fiisikada.
- Labadan caalin ayaa ku muteystey abaalmarintan, hoowlaha ey ka qabteen ama cilmiga ku soo kordhiyeen ee la xiriira sida danabku saameyn ugu yeelan karo dhaqaaqa iyo gudbinta awoodda korantada.
- Kuliyadda boqortooyada ee tacliinta sare, ayaa u aqoonsatey : Labada caalin ee la kala yiraahdo Albert Fert oo u dhashey dalka Farnsiiska. Kana howlgala jaamicadda ”Paris Sud” ee carrigga Faransiiska, iyo Peter Grünberg, oo Jarmal ah, kana howlgala machadka cilmibaarista ”yiilish” - Jülich ee carrigga Jarmalka.
Biladda Nobel-ka ee maadada Kimisteriga ayaa lagu dhawaaqey maanta duhurnimadii in lagu sharfeyGerhart Ertel, una dhashey dalka Jarmalka.
Caalinka ayaa la sheegey in uu ku heley hoowsha baaxadda leh ee uu ka keystey waxa lagu magacaabofalgalka Kemisteriga ee dusha sare.
Gerhardt wuxuu dhashey sannadkii 1936, waana caali ka howlgala jaamicd ku taala magaalada BerlinDa’diisuna waa 71 jir.
- Aad ayaan ugu fajacey waayo ma aanan fileyn.
Waxaa liiska ku jirey dhowr iyo toban caalin oo intuba u qalmaan helida bilad sharaftan.